किन बिकेनन् एयर इण्डिया, भारत पेट्रोलियम जस्ता कम्पनी ? – Clickmandu
बीबीसी २०७७ माघ ९ गते १५:२१ मा प्रकाशित
एयर इण्डिया केहि प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र इकाइहरुमध्ये एक हो जुन सरकारले २००१ देखि बेच्न खोजिरहेको छ। सरकारले यो सरकारी एयरलाइन बेच्न एकल क्रेता पनि फेला पार्न सकेको छैन।
एयर इंडिया हाल ठूलो रकम ऋणको जञ्जालमा फसेको छ । एयर इंडियाका सबै दायित्वहरू २०१८/१९ मा भारु ७०६८६.६ करोडभन्दा माथि थिए।
सन् २००७ मा आन्तरिक उडान कम्पनी भारतीय एयरलाइन्ससँग मर्जर भए पनि कम्पनी घाटामा चलेको छ।
२०१८ मा सरकारले एयरलाइनलाई फेरि बेच्न ल्यायो । तर यस पटक पनि यसमा सफल हुन सकेन किनकि सरकारले २४ प्रतिशतको हिस्सेदारी कायम राख्न चाहेको थियो। यस कारणका लागि, धेरै लगानीकर्ताहरूले यसलाई खरीद गर्न चासो देखाएनन्। अन्तमा, २०२० जनवरीमा, सरकारले घोषणा गर्यो कि यो ष्लतभचलबतष्यलबणिको बोझले दबिएको यस अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइनको सम्पूर्ण भाग बेच्न तयार छ।
टाटा किन्न रुचि छ
हालसालैका मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार सरकारले यो कुरा धेरै खरीददारहरूबाट खरिद गर्न चासो देखाएको छ, जसलाई प्रस्ताव पठाउन भनिने छ जस पछि लिलामी प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
मिडिया रिपोर्टअनुसार, केवल दुई पक्षहरू यसलाई खरीद गर्न इच्छुक छन्। पहिलो यो टाटा सन्स र दोस्रो एयर एयरका कर्मचारी र अमेरिकी लगानी कम्पनी इन्टरप्सबाट खरीद गर्ने हो।
यद्यपि विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि एयर इण्डियाले यो वित्तीय वर्ष अर्थात् मार्चको अन्त्यसम्म क्रेता लिन सक्ने छैन।
चार्टर उडान सेवा गरिरहेका क्लब वन एयरका प्रमुख कार्यकारी (टेक्निकल) कर्नल संजय जुल्काले ‘यूपीए र एनडीए सरकारको विनिवेशले ल्याएका सर्तहरूमा कमजोरी रहेको कुरा स्पष्ट छ। तर उनीसँग छैन। भविष्यका बोलपत्रदाताहरूको कुरा सुन्नुभयो। यस कारणले गर्दा यस कम्पनीको विनिवेश प्रक्रिया यति लामो समय सम्म गएको छ कि यो विगतमा राम्रोसँग गर्न सक्थ्यो।’
दक्षिण एसियाका लागि उड्डयन सल्लाहकार सेन्टर फर एशिया प्रशान्त उड्डयनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल कौल जुन जुनमा सफल बोलपत्र घोषणा गर्ने र डिसेम्बरसम्म निजी स्वामित्व हस्तान्तरण हुने अपेक्षा राख्छन्।
कपिल कौलले भने, ‘उनीहरू रणनीतिक हिसाबले कटिबद्ध छन् र मलाई लाग्छ कि उनीहरूले यस पटक बेच्न सक्नेछन्। उनीहरूले धेरै यिबलकण लिएका छन् र उनीहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् कि बिड इन्टरप्राइज मूल्यमा हुनेछ।’
भारतको असफल लगानी रणनीति
यो एयर इण्डिया मात्र होइन जसको सरकारले क्रेतालाई भेट्टाउन निकै कडा परिश्रम गर्नुपर्‍यो, तर भारतको विनिवेश योजना पनि फ्लप शोको जस्तो छ। पछिल्ला १२ बर्षमा सरकारले दुई पटक मात्र यसको विनिवेश लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छ।
विनिवेश एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसमा सरकारले यसको नियन्त्रणमा रहेको सार्वजनिक क्षेत्र इकाइहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर आफ्नो कोष बढाउँदछ। सरकारहरूले यो तिनीहरूको खर्च र आय बीचको भिन्नता कम गर्न।
गत आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा सरकारले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न १४७०० करोड रुपैयाँ गुमाएको थियो भने त्यस बर्ष १.०५ लाख करोड उठाउने लक्ष्य थियो। एक विश्लेषक नाम न छाप्न सर्तमा भन्छन्, ूप्राय जसो सार्वजनिक क्षेत्रका कम्पनीहरूको व्यवस्थापन राम्रो छैन र धेरै सरकारी हस्तक्षेप छ। यसमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूलाई पनि गाह्रो लाग्छ। उनीहरूले यी युनिटहरू बेच्ने पाउँदछन्।
वित्तीय वर्ष २०२०/२१ मार्च २१ मार्चमा समाप्त हुन्छ र सरकारले यस वर्षका लागि २.१ लाख करोडको लक्ष्य राखेको छ जसमध्ये उसले २८२९८.२६ करोड मात्र जुटाउन सफल भएको छ।
लगानी र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका तथ्यांकका अनुसार सरकारले अहिलेसम्म हिन्दुस्तान एयरोनटिक्स, भारत डाईनामिक्स, मजागाउँ डक शिपबिल्डर्स र आईआरसीटीसीमा आफ्नो हिस्सेदारी छुट्याएको छ।
गत वर्ष जुलाईमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले भने कि केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले २३ पीएसयू बेच्न अनुमति दिएको छ। ती मध्ये केही भारत पम्प र कम्प्रेसर, भारत सिमेन्ट कर्पोरेशन, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन, भारत अर्थ मूवर्स र पवन हंस हुन्।
सरकारले सार्वजनिक लिस्टिंग कम्पनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी) को विनिवेश गर्ने योजना बनाएको छ। यसका साथै आईडीबीआई बैंकको सेयर लिस्टिंग र बिक्री गरेर ९०,००० करोड संकलन गर्ने पनि योजना छ।
वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा अरुण कुमार विश्वास गर्दछन् कि यो लक्ष्य आफैंमा अव्यावहारिक छ र सुस्त अर्थतन्त्रले समस्याहरुलाई बढाउँदैछ।
उनी भन्छन्, ‘सुस्त अर्थतन्त्रका कारण गत वर्ष सरकारले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सकेन। अल्छी अर्थतन्त्रमा सम्पत्ति बेच्न धेरै गाह्रो छ किनकि उनीहरूलाई खरीद गर्न चाहने मानिससँग आय छैन।’
उनका अनुसार बजेटमा वित्तीय घाटा नाटकीय रूपमा बढ्दैछ, जसले सरकारी खर्चमा गम्भीर असर पार्नेछ। सरकारको कुल आय र खर्चको बीचको भिन्नतालाई वित्तीय घाटा भनिन्छ। के सरकारले कुनै पनि हालतमा यो खाली गर्न सक्छ ? यस प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले यो खाली गर्न सक्दैनन्। कर्पोरेट कर उठाउन सक्दैनन्।’
उसले गत वर्ष यो कम गर्‍यो। आयकर संकलन यस्तै नै कम छ किनभने धेरै मानिसहरूले महामारीको समयमा आफ्नो जागिर गुमाएका छन्। अप्रत्यक्ष कर पनि बढाउन सकिदैन किनकि यसले जीएसटी काउन्सिलमा जान्छ र राज्यले यसमा सहमति जनाउँदैन किनकि यसले मुद्रास्फीतिमा असर पार्नेछ। उनीहरूले आफ्नो खर्च कम गर्नेछन् ताकि अर्थव्यवस्था सुस्त रहनेछ किनकि सरकार खर्च गरेर अर्थव्यवस्थालाई अगाडि बढाउन चाहँदैन, यसकारण माग बढ्दैन।
वित्तीय घाटा फेला पार्न कठिन
केयर रेटिंग्सका प्रमुख अर्थशास्त्री मदन सुब्निभिस डा अरुण कुमारसँग सहमत हुनुहुन्छ कि सरकारले यस आर्थिक वर्षमा एयर इंडिया वा बीपीसीएल ९भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन लिमिटेड बेच्न सक्ने सम्भावना छैन।
उनीहरूले बजेट पछि पनि एयर इंडिया बेच्न सक्नेछैनन् र मार्च अघि बेच्न सक्नेछैनन्। यो एकदम गाह्रो कुरा हो किनभने यो घाटा कम्पनी हो र बीपीसीएल भन्दा बिलकुलै फरक छ। बीपीसीएल अझै पनि लाभदायक कम्पनी हो। यो, उनी पनि यसलाई बेच्न सफल भएको छैन।
विनिवेशको लक्ष्य यथार्थपरक हुँदैन। सरकारले आफूले चाहेको कम्पनीबाट कुनै ठोस योजना बनाउँदैन। उनीहरूले ५० देखि ८० हजार करोडको लक्ष्य बदल्नु पर्छ जुन सम्भव छ।
उनी भन्छन्, ‘यस वर्ष उनीहरूले वित्तीय घाटा पूरा गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सकेनन्। उनीहरूले बजारबाट बढी उधारो लिने छन्। सरकारले अधिक विनिवेश महसुस नगरेसम्म हामी वित्तीय घाटाको अन्तरलाई पूरा गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम हुनेछैनौं। योजना ल्याउनु हुँदैन।’